ကျန်မာရေးအတွက်ဂေါ်ရခါးသီးလေးများ ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
28.08.2013 နေ့ ထုတ်ပြည်ထောင်စုသတင်းစာတွင်ဖော်ပြခံရတဲ့ဆောင်းပါးလေးပါ။
သတင်းစာမှာ စာမျက်နှာအနေအထားအရ အနည်းငယ်သာဖော်ပြခံရပါတယ်။ ခု ကျွန်မရဲ့ ဆောင်းပါး အပြည့်အစုံ နဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်များကို မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်။ (စေတနာများစွာဖြင့်..ပေါက်ပေါက်)
** ကျမ္မာရေးအတွက် လက်တကမ်းမှ ဂေါ်ရခါးသီးလေးများ **
သခွားသီး၊ ကျောက်ဖရုံသီးတို့ နှင့်မျိုးနွယ်ဆင်တူသော ဂေါ်ရခါးသီးလေးများသည် ရုက္ခဗေဒသဘောအရ အသီးအနှံတစ်မျိုးဖြစ် သော်လဲ၊ ၄င်းကိုဟင်းသီးအရွက်အဖြစ်သာအသုံးပြုလေ့ရှိကြ၏။ ကမ္ဘာသုံးသီးနှံဖြစ်သော ဂေါ်ရခါးသီးကို အခြားနိုင်ငံများတွင် chocho ဟုခေါ်ကြပြီး၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လူကြိုက်များရေပန်းစားလျှက်ရှိသည်။ မြန်မာပြည်၏ ရှမ်းပြည် ကဲ့သို့အေးမြသောဒေသများတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးလိုလိုတွေ့ ရတတ်ပြီး၊ စူကာသီး ဟုခေါ်ဆိုကြ၏။ သဘာဝအလျောက် စိမ်း စိမ်းစိုစိုနွယ်ပင်နှာမောင်းများဖြင့် ကပ်မြှောင်ပေါက်ရောက်လေ့ရှိကြပြီး၊ အပင်နွယ်တက်နိုင်စေရန် စင်ခံ၍စိုက်ပျိုးပေးပါက ကြီး ထွားနှုန်းလျှင်မြန်စေသည်။ အပင်မှ အဖြူရောင်အဖိုပွင့်နှင့် အမပွင့်လေးများ တပြိုင်နက်တည်းဖူးပွင့်ကြပြီး၊ ပျား/ပိတုန်းလေးများ က ၀တ်မှုန်ကူးပေးလေ့ရှိကြ၏။ ၀တ်မှုန်ကူးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၃၀အကြာတွင် ဂေါ်ရခါးသီးကို ခူးဆွတ်နိုင်ပြီး၊ ရာသီတစ်ရာသီ တွင် အပင်တစ်ပင်တည်းမှ ဂေါ်ရခါးသီးအလုံးပေါင်း ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ အသီးသီးပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဂေါ်ရခါးသီး၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ အရင်းပိုင်းတွင်လုံးဝန်း၍ အဖျားရှုးပါသည်။ သို့ သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသီးပုံသဏ္ဍွှာန်ကို လက်ဝှေ့ ထိုးသော လက်အိတ်အစွပ်ပုံစံ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများသွားမရှိဘဲ ပါးစပ်စေ့ထားသောလူမျက်နှာပုံစံများအဖြစ် ထူးခြားစွာတွေ့ ရတတ်သည်။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အချို့ အသီးများ၏ အပေါ်ယံအခွံတွင် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဆူးချွန်များ ပါရှိကြ၏။ အတန်ငယ် ကြွတ်ဆတ်သော အဖြူရောင်အသားများ၏ အလယ်တွင် နို့ နှစ် ရောင်အစေ့ပါရှိပြီး၊ ထိုအစေ့ကိုတော့စားလေ့မရှိပါ။
အရည်ရွှမ်းပြီး အရသာချိုသောဂေါ်ရခါးသီးကို ကြက်ဥ/ဘဲဥဖြင့် ရောမွှေကြော်ခြင်း၊ နှစ်သက်ရာ အသားတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ရောကြော် ခြင်း၊ ပုစွန်ခြောက်ဖြင့်ကြော်ချက်ချက်ခြင်း၊ အခြားဟင်းသီး ဟင်းရွက်များဖြင့်ရောကာ သက်သက်လွတ်အစိမ်းကြော်ခြင်းး၊ ရေနွေး ဖြော (သို့ မဟုတ်) ခပ်စိမ်းစိမ်းပြုတ်ကာ ငပိရည်တို့ မြှုံ့ ခြင်း၊ သီးစုံပဲကုလားဟင်း/ချည်ရည်ဟင်းချက်ခြင်း၊ ဗူးသီးရှား ပါးသော ရာသီတွင် ဂေါ်ရခါးသီးကို ဗူးသီးကြော်ကဲ့သို့ ကြော်စားခြင်း၊ ကြက်သားဖြင့်ရောနှောကာ ကာလသားချက်စားခြင်း၊ အသီးကို အစိမ်းလိုက်အသားများကိုခြစ်ယူ၍ သုပ်စားခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးလုပ်စားနိုင်၏။ အသီးသာမက၊ အရွက်၊ ပင်စည် အညွန့် နှင့် အမြစ်တို့ ကိုပါ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အစိမ်းရောင်ရှိပြီး လတ်ဆတ်သော ဂေါ်ရခါးရွက်အညွန့် (စူကာညွန့် )သည် ကန်စွန်း၊ ဟင်းနု နယ်၊ ပဲညွန့် တို့ ထက် အရသာပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်၊ မီးဖိုချောင်သုံးဈေးကွက်ထဲတွင် ဂေါ်ရခါးညွန့် က အသီးထက် ဈေးပို ကောင်းပါသည်။
USDA ၏ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအရ၊ ၁၀၀ ဂရမ် အလေးချိန်ရှိသောဂေါ်ရခါးသီးထဲတွင် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်း ကျိုးပြုစေသော၊ ခွန်အား ၁၉ ကယ်လိုရီ၊ ကစီဓာတ် ၄.၅၁ ဂရမ်၊ ပရိုတင်း ၀.၈၂ ဂရမ်၊ အဆီဓာတ် ၀.၁၃ ဂရမ်၊ ချေဖျက်လွယ် သောအမျှင်ဓာတ် ၁.၇ ဂရမ်၊ ဖောလိပ် ၉၃ µg၊ နီအာစင် ၀.၄၇ မီလီဂရမ်၊ ပန်တိုသနစ်အက်ဆစ် ၀.၂၄၉ မီလီဂရမ်၊ ပိုင်ရီ ဒေါက်ဆင်း ၀.၀၇၆ မီလီဂရမ်၊ ရီဘိုဖလာဗင် ၀.၀၂၉ မီလီဂရမ်၊ သီအာမင် ၀.၀၂၅ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်စီ ၇.၇ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်အီး ၀.၁၂ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်ကေ ၄.၁ µg၊ ဆိုဒီယမ် ၂ မီလီဂရမ်၊ ပိုတက်စီယမ် ၁၂၅ မီလီဂရမ်၊ ကယ်လ်စီယမ် ၁၇ မီလီဂရမ်၊ သံဓာတ် ၀.၃၄ မီလီဂရမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ် ၁၂ မီလီဂရမ်၊ မဂ္ဂနီးစ် ၀.၁၈၉ မီလီဂရမ်၊ ဖော့စဖရက် ၁၈ မီလီဂရမ်၊ စီလီနီယမ် ၀.၂ မိုက်ကရိုဂရမ် နှင့် ဇင့် ၀.၇၂ မီလီဂရမ်တို့အသီးသီးပါရှိကြပြီး၊ ဘေးဥပါသ်ဖြစ်စေသော ကိုလက်စထရော လုံးဝမပါရှိပါ။
1. ဂေါ်ရခါးသီးထဲတွင်ပါရှိသော ဖောလိပ်ဓာတ်သည် သွေးထဲရှိဆဲလ်များနှင့် DNA ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်မှုကို အားပေးခြင်း၊ မွေးဖွားလာသည့်ရင်သွေးငယ်များတွင် မွေးရာပါအာရုံကြောရောဂါပြသနာများမှ ကင်းဝေးစေခြင်း၊ ပေါင်မပြည့်သော ကလေးမွေးဖွားခြင်းမှကင်းဝေးခြင်း စသည့်ကောင်းကျိုးများပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့် သားသမီယူရန်အစီအစဉ်ရှိသော မိခင် လောင်းများ/ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တလျှောက်လုံးနှင့် နို့ ချိုတိုက်ကျွေးနေစဉ်ကာလတို့ မှာလည်း
ဂေါ်ရခါးသီးကို မဖြစ် မနေစားပေးသင့်ပါသည်။ ၁၉၉၆ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ သုတေသနပြုကြရာ၊ အရွယ်ရောက်နေသူ အမျိုးသမီး များ၏ တစ်နေ့ တာလုိအပ်သော ဖောလိပ်ပမာဏမှာ ၄၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ရာ၊ ဖောလိပ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝသော ဂေါ်ရခါး သီးကို မှန်မှန်စားပေးရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။
2. အမျှင်ဓါတ်တို့ စုဝေးရာ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်အပြင် ရေဓာတ် ၉၄% ပါရှိ၏။ ထို့ ပြင် ကိုလက်စထရောလုံးဝ မပါရှိခြင်း ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။
3. ဗီတာမင်စီ၊ အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ် နှင့် poly-phenolic (ခေါ်) ဓာတ်တိုးဆန့် ကျင်ပစ္စည်းများပါရှိကြရာ၊ ထိုဓာတ် များက free radicals ကြောင့် ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အစာအိမ်၊ ရင်သား၊ မျိုးဥ အိမ်၊ သားအိမ်၊ အူမကြီး နှင့် အဆုတ်ကင်ဆာဆဲလ်များ ကြီးထွားလာခြင်းကို ဟန့် တားပေးနိုင်ပါသည်။
4. ဂေါ်ရခါးသီးထဲတွင်ပါရှိသော မဂ္ဂနီးစ် နှင့် ဗီတာမင်ဘီ-၆ တို့ သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားသောအခါ ဓာတ်ပြုကြပြီး နောက်၊ ပရိုတင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲကာခွန်အားများကိုထုတ်ပေးနိုင်၏။ ထို့ ကြောင့် အရွယ် ၃ ပါးမရွေးစားသုံးသင့်ပါသည်။
5. အူသိမ်၊အူမ တို့ စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်၏။
6. အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ တစ်နေ့ တာဗီတာမင်ကေ လိုအပ်ချက်မှာ ၉၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသားတစ်ဦး၏ လိုအပ်ချက်မှာ ၁၂၀မီလီဂရမ်ဖြစ်၏။ ထို့ ကြောင့် ဗီတာမင်ကေကြွယ်ဝသော ဂေါ်ရခါးသီးကိုစားပေးခြင်းဖြင့် အရိုးပွခြင်းမှကာကွယ်ပေး နိုင်ပါသည်။
7. ပိုတက်စီယမ် နှင့် ဗီတာမင်ဘီ-၆ တို့ လုံလောက်စွာပါရှိခြင်းကြောင့်၊ အောက်စီဂျင်ကို ဦးနှောက်သို့ ရောက်အောင် စွမ်း ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး၊ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားစေပါသည်။ စိတ်ရွှင်လန်းဆန်းစေပြီး၊ အယ်လ်ဇိုင်မား(ခေါ်) ဦး နှောက်အကြိုဇရာရောဂါမှလည်း ကင်းဝေးစေနိုင်၏။ ထို့ ပြင် နာတာရှည်အိပ်မပျော်သူများအတွက်၊ အထူးသင့်တော်ပြီး ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှုများကိုလည်း သက်သာလာစေပါသည်။
8. သွားဖုံးကျန်းမာရေး၊ သွားကျန်းမာရေး၊ ခံတွင်းအပူလောင်ခြင်း၊ အဆုတ်ကျန်းမာရေး နှင့် ကျောရိုးကျန်းမာရေးတို့ ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေ၏။
9. ဂေါ်ရခါးသီးသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်သော အပူဖျား၊ အအေးဖျား နာခြင်း နှင့် ကူးစက်တုပ်ကွေးရောဂါများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
10. ဂေါ်ရခါးသီးထဲတွင် ကော့ပါးဓာတ်အမြောက်အများပါရှိသဖြင့်၊ ဟိုမုန်းထုတ်လုပ်ခြင်း/စုပ်ယူခြင်းစသည့် သိုင်းရွိုက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အထောက်အကူပြုကာ၊ သိုင်းရွိုက်ကိုကျန်းမာစေပါသည်။
11. ဂေါ်ရခါးသီးထဲတွင်ပါရှိသော ဗီတာမင်အီးနှင့်ဗီတာမင်စီတို့ သည် အသားအရေကျန်းမာစေခြင်း၊ အက်စ်ကောဘစ် အက်ဆစ်သည် အရွယ်တင်နုပျိုစေခြင်း၊ ဖောလိပ်သည် အသားရေတင်းရင်းစေခြင်း၊ နီအာစင်းဓာတ်သည် အရေပြား တစ်ရှုးများကိုကျန်းမာစေခြင်း၊ ဇင့်ဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားထဲမှအဆီထွက်ရှိမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး၊ မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ၀က်ခြံများကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေခြင်း စသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးပြုပါသည်။
12. ရင်ခွင်ပိုက်ရင်သွေးငယ်များအတွက် တနေ့ တာဗီတာမင်ဘီ-၆ လိုအပ်ချက်ပမာဏမှာ ၀.၀၁၅ မီလီဂရမ်၊ ကလေးများ အတွက် ၀.၂ မှ ၁.၂ မီလီဂရမ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ၁.၄ မှ ၂ မီလီဂရမ်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ၀.၀၂ မီလီဂရမ်လိုအပ်၏။ ထို့ ကြောင့် ဗီတာဘီ-၆ ကြွယ်ဝသည့် ဂေါ်ရခါးသီးကို အရွယ် ၃ပါး မရွေးစားသုံးသင့်ပါသည်။
13. ဂေါ်ရခါးသီးထဲတွင် မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓါတ် ပါရှိသောကြောင့် မှန်မှန်စားပေးခြင်းဖြင့် ခြေသလုံးကြွက်သားများ ကြွက်တက်ခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်၏။
14. လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့ တာ အမျှင်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ပမာဏ ၁၄%ကို ဂေါ်ရခါးသီးမှရရှိကာ၊ ကိုလက်စထရော ကျစေ၍ သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်တိုးပွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဆီးချိုရောာဂါသည်များကို ကောင်းကျိုးပြု ပါသည်။
15. အသီးထဲတွင်ပါရှိသော ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်သည် သွေးထဲရှိကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို သန့် စင်ပေးရုံသာမက၊ သွေးခုန် နှုန်းဖိအားကိုထိန်းချုပ်ပေးသဖြင့် သွေးတိုးကျစေပါသည်။
16. အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းနှင့် ဂေါက်ရောဂါ သမားများအတွက်၊ ဖလေဗိုနွိုက်ပါသော ဂေါ်ရခါးသီးကို စားပေးခြင်း ဖြင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကိုသက်သာလာစေပါသည်။
17. နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်များကို ဂေါ်ရခါးသီးကျွေး၍ဆေးသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အသီးထဲတွင်ပါရှိသော ဖောလိပ်/ပိုတက် စီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်ပေါင်းစုများသည် သွေးထဲရှိ homocysteine ပမာဏကို လျော့ချပေးနိုင်သဖြင့် နှလုံးရောဂါ သာမက၊ နှလုံးရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သည့်လေဖြတ်ခြင်းများကိုပါ မဖြစ်စေနိုင်ဟုဆိုပါသည်။
18. ဂေါ်ရခါးသီးသာမက၊ ဂေါ်ရခါးပင်၏ အရွက်/အညွန့် တို့ သည်လဲ လွန်စွာဆေးဘက်သောကြောင့် အရွက်ကြော်/ဟင်းချို /ကြော်ချက်ဟင်း/အရွက်ပြုတ်လုပ်၍ စားသုံးသင့်ပါသည်။ အရွက်/အညွန့် တို့ ကို အစိမ်း(သို့ မဟုတ်) အခြောက်ခံပြီး လက်ဘက်ရည်ကြမ်းအဖြစ် မှန်မှန်သောက်သုံးသွားပါက၊ သွေးတိုးရောဂါကိုကျစေခြင်း၊ သွေးကြောမကြီးများ ပိတ်ဆို့့ တင်းမာမှုကို ပြေလျော့စေနိုင်ခြင်း၊ ဆီးရွှင်စေခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ထဲရှိ ဆီးကျောက်များကိုကျေစေခြင်း စသည်ဖြင့် ဆေးစွမ်းထက်မြက်လှပါသည်။
မှတ်ချက်။ (၁)ရင့်သောအသီး၏ အပေါ်ယံအခွံသည် လက်သည်းနှင့်ဆိတ်ကြည့်၍ မရနိုင်အောင် ကြမ်းတမ်းမာကျောပြီး၊ အသား မှာဖွယ်၍ အရသာလည်းမကောင်းပါ။ အရွေးမမှားဘို့ လိုပါသည်။ (၂) ပိုးသတ်ဆေးအန္တာရာယ်မှ ကင်းဝေအောင် ဂေါ်ရခါးသီးကို မလှီးချွတ်ခင် ရှေးဦးစွာ ရေစင်စင်ဆေးပေးရပါမည်။ အခွံနွှာသောအခါတွင် အစေးများလက်ကို ကပ်စေးစေတတ်သဖြင့် ရေဘုံပိုင် ဖွင့်၍ အခွံနွှာခြင်းက ပိုမိုအဆင်ပြေစေ၏။
ဂေါ်ရခါးသီးလေးများသည် လူတန်းစေ့စားနိုင်အောင်ဈေးနှုန်းချိုသာသလောက် အရသာလဲချိုကာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကင်းလှပါ သည်။ ထို့ ကြောင့် မိမိလက်တကမ်းမှ အလွယ်တကူရနိုင်သော ဂေါ်ရခါးသီးလေးများကို အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ ဆိုသလို စားသုံးပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
ကိုးကား (ekcyclopedia – nutritent Chayote)
Posted in: ဂေါ်ရခါးသီး/ရွက်